Ị nwere ike ịmepụta mbipụta nke gị nkiri na nchekwa media site na-ere ọkụ na vidiyo na ha. Ezi ọkụ software ga-enyere gị DVD na-dakọtara na ọ fọrọ nke nta ọ bụla DVD ọkpụkpọ na ahịa. DVD authoring software dị ọtụtụ. Ihe ị na-ahọrọ iji bụ otu okwu nke mmasị. Ụfọdụ n'ime ndị a software nwere ike ibudata ma ọ bụ zụrụ site iche iche nyiwe. The ọkụ usoro bụ fọrọ nke nta otu ihe ahụ. Nanị ihe dị iche nwere ike ịbụ ha interfaces. Anyị na-aga anya n'ime ụzọ abụọ nke na-ere ọkụ gị QuickTime videos ka a DVD ugbu a.
The DVD ngwá ọrụ bụ kasị eji ịba uru na ngwa. Ọ ga-eji na-esure a nkiri ka fọrọ nke nta ọ bụla usoro playable on a mobile ngwaọrụ ma ọ bụ a Ịgba Cha Cha usoro.
Part 1, otú ọkụ QuickTime nkiri ka dvd
Nkebi nke 2: Burning QuickTime Movies ka a DVD na iji ọkụ ịba uru
The Ọkụ arụmọrụ nke Wondershare Video Ntụgharị
Ị nwere ike ọkụ fọrọ nke nta ọ bụla media format n'ime a DVD site na ịpị Ọkụ taabụ. Iji ya bụ dị mfe dị ka adọkpụpụta faịlụ n'ime isi window ma na-aga dị ka edezi media tupu ere ha.
Mgbe na-ere ọkụ gị mgbasa ozi, ị nwere usoro nke nhọrọ n'akụkụ aka nri nke window.
N'okpuru template button ị nwere ike họrọ nke template iji si Wondershare n'ọbá akwụkwọ. Ị nwekwara otu nhọrọ nke na-ebugote omenala mere ndebiri nke nwere ike a ndabere foto ma ọ bụ ụfọdụ ndabere music.
Wondershare Video Ntụgharị arụ ọrụ nke ọma na ma Windows na Mac.
Olee otú ọkụ QuickTime nkiri ka DVD iji Wondershare Video Ntụgharị Ultimate
Ọ bụrụ na ị na-adịghị Wondershare ugbua arụnyere na akụrụngwa gị, biko ibudata ya na ebe a.
Iji jiri Wondershare Video Ntụgharị, a otutu nzọụkwụ mkpa a ga-agbaso dị ka agbajikwa ala na ndị na-esonụ.
Ịtụbata vidiyo ma ọ bụ foto
Ozugbo ngwa bụ na-emeghe click n'elu hapụrụ kasị ngalaba na-eme ka ala na dobe ala menu maka agbakwunye faịlụ.
Ị nwere ike pịa na Add Files menu njikọ ma ọ bụ ịdọrọ faịlụ n'ime ọrụ ebe.
Pịa na Dezie bọtịnụ na aka nri ngalaba nke ihuenyo ma ọ bụ nri pịa iji nweta a onodu menu ka ịnweta edezi nhọrọ.
Ị nwere ike inyocha niile dị nhọrọ dị ka ọ bụla mgbanwe na ị na-eme nwere ike anya n'otu ntabi na gbawara n'etiti meziri.
Nhọrọ dị ka nzacha, ederede na mmetụta nwekwara ike kwukwara na video edezi ebi ndụ dị ka hụrụ n'elu.
Ihe atụ, iji tinye a watermark ka nkiri dị nnọọ pịa na mmiri akara akara ngosi na n'elu nke gbawara n'etiti ihuenyo.
Ị nwere ike nakwa hazie music ngwakọta na photos.
Customizing DVD si NchNhr
E a dịgasị iche iche nke menu gburugburu na ndebiri n'akụkụ aka nri nke ngwa ịhọrọ site na. Ị nwere ike họrọ tupu arụnyere gburugburu ma ọ bụ download ọzọ na-adịbeghị anya n'anya.
I nwekwara ike họrọ chọrọ ndabere, tinye ụfọdụ isi ma ọ bụ ọbụna tinye ederede na DVD menu.
Wondershare-Enye gị ohere ịgbanwe isi si thumbnail site na ịpị thumbnail na-echefu ihe nhọrọ na a ọhụrụ window ịgbanwe ndabara image site na-ahọpụta ọzọ oyiyi ma ọ bụ na-adọkpụpụta oyiyi sliders ghota na chọrọ etiti image dị ka e gosiri.
Mgbe niile mgbanwe e mere, ị nwere ike ịnọ na-ịhụchalụ arụ ọrụ gị. Ọ bụrụ na ka nsogbu na ụfọdụ mgbanwe ị nwere ike mgbe niile na-aga azụ ka usoro ihe omume ma melite n'elu ya.
Ọkụ gị Movie
Ị nwere ike ma na-ahọrọ na-ere ọkụ nke video ozugbo ma ọ bụ na-ahọrọ ike a .ISO faịlụ. Ọkụ ga-ewe oge, n'ihi ya, na-egosipụta ụfọdụ ndidi dị ka ị ga-echere maka ihe nkiri ịrụcha ọkụ usoro.
Ọ bụ ya, ugbu a, ị pụrụ ịnụ ụtọ gị nkiri.
Mgbe ị dị njikere ọkụ gị nkiri ka a DVD ị nwekwara ike iji apa Disk ịba uru site na isoro usoro n'okpuru. I nwekwara ike inweta ihe apa ọkụ ịba uru site na nbudata ya si ebe a.
Ẹkedori apa ọkụ mmekọ.
Pịa na Video taabụ.
Nye ndị DVD a aha.
Wee họrọ "DVD" si nhọrọ menu ke ziri ezi.
Ịdọrọ gị nkiri faịlụ ka window.
Pịa na apa ọkụ icon na-amalite na-ere ọkụ.
Ọ bụrụ na ị bụghị converted gị video ziri ezi na usoro maka ọkụ ịba uru ị ga-kpaliri iji tọghata ya dị ka e gosiri n'okpuru.
N'ihu, pịa na Ee bọtịnụ na ị ga-ahụ ozugbo na ịzọpụta ọnọdụ.
Dabere na size nke nkiri faịlụ, akakabarede ga-ewe oge iji wuchaa.
Ozugbo akakabarede a mere, fanye a ide DVD na pịa apa ọkụ bọtịnụ iji malite apa ọkụ usoro.
The apa ọkụ usoro mkparịta ụka ga-wepuÚ Ozugbo apa ọkụ usoro okokụre.
Iwepụ ụda DVD si tree.
Oge na-ele gị nkiri si gị DVD ọkpụkpọ ugbu a!
Olee otú ubi QuickTime video on Mac?
> Resource> QuickTime> 2 ụzọ na-esure QuickTime nkiri ka DVD